Chii chisingagone kuchenesa mudziyo?
Kazhinji kutaura, tinotenga machina ekuchenesa mudzimba kuti ayamwe marara, asi kutaura zvazviri, zvinhu zvakawanda hazvigone kuyamwa, uye unogona kusaziva zvakanyanya. Saka nhasi tichakurukura izvo zvisingakwanise kuyamwa nevachenesa. Rangarira kutarisisa uye usaite chero chinhu chinokuvadza kune vacuu ...
Maitiro ekuchenesa uye chengetedza iyo yekutsuka
Semidziyo yekuchenesa imba - yekuchenesa, inoita basa rakakosha, ingangoita mhuri yega yega chishandiso chakakodzera. Vacuum cleaner iri nyore kwazvo kushandisa, asi vanhu vazhinji havadi kuchenesa uye kugadzirisa kweye vacuum cleaner. Ngatidzidzei kuchenesa uye kuchengetedza va ...
Fekitori yedu yave nemakore gumi, uye isu tiri kugara tichiedza nepese kupa zvigadzirwa izvo zvakakwana kune mutengi wedu, isu tinotarisa chidimbu chega chega tisati tatumira kunze, tinotarisira kuti chidimbu chega chega paruoko rwemutengi wedu chakanaka uye chakaringana Asi isu tinoziva izvo chete zvigadzirwa zvekare hazvikwani, kuitira kupa ...
Shangfan, Fengnan Village, Yangming Street, Yuyao Guta, Ningbo Zhejiang, PRChina, 315400